Ohere na ihe iyi egwu dikotara na otu oru na otu uzo | RayHaber
HomeTurkeyBlack Sea Region61 TrabzonOhere dị iche iche na ihe iyi egwu dị na Otu Ọgbọ na Otu Mmemme
11 / 11 / 2019 61 Trabzon, ụgbọ okporo ígwè, General, Black Sea Region, Isi akụkọ, Turkey
ọgbọ nke ohere na ihe egwu dị na ọrụ okporo ụzọ
Ohere dị iche iche na ihe iyi egwu dị na Otu Ọgbọ Otu Ọrụ Otu; New Turkey, na-ejikọ China na Europe "Otu ọgbọ ga-ike ọnọdụ nke a ụzọ oru ngo" isonyere uwa ụwa iji.
Osote Rector nke Mahadum Eurasia Dr. Ersan Bocutoğlu, China kasị nke burukwa nke ụwa, ejikọta Europe a ọgbọ eji a Road Project değerlendz na Caspian your-Azerbaijan-Georgia-Turkey European akara, na-aga n'ihu 2 Afrika, 2 oké osimiri, 12 puku kilometa ụzọ 12 iche site ugboro n'ụbọchị erutela. A na-eji ụgbọ oloko ahụ, nke a nabatara ya na Ankara, na nke mbụ ya na njikọta Baku-Tbilisi-Kars Railway na njikọ Marmaray na Otu Ọgbọ Otu.
China Railway Express si Turkey n'ihi Itie, ọha na eze azụlitewo a-echebe a na-ewere na ebe omumu nke China mkpa iji nye ihe ọmụma banyere a ụzọ oru ngo.
G ISN A B ROR RO ROBỌCHEN AH G?
Site na ike akụ na ụba pụrụ iche ọ nwetala kemgbe afọ 1980, China kwupụtara ọkwa ụwa nke “Otu Ọgbọ Otu Ọhụhụ” na 2013. Otu Ọgbọ Otu Ọgbọ nke Nlere Okporo Roadzọ na-anọchi anya mmaliteghachi nke okporo ụzọ siliki mere eme site na China rue Europe; Ogidi okporo ụzọ na-ehibe ntọala ọdụ ụgbọ mmiri nke na-erute Europe site na ọdụ ụgbọ mmiri Piraeus na Gris na Venice na Italy site na ikpuchi Oké Osimiri Uhie, Oké Osimiri India, Osimiri Uhie, Suez Canal na Oké Osimiri Mediterenian na-amalite na China.
Ọgbọ a na-arụ bụ ụzọ dị iche iche, ihe na-aga aga mba ọzọ, na mpaghara azụmahịa, azụmaahịa na ego, ọ bụ ezie na akọwapụtaghị ókèala ya n'ụzọ doro anya.
Otu oru mmepe otu uzo bu ihe ngosiputa Dollar Dollar Dollarị nke kpuchiri ihe karịrị mba 60 na ebumnuche ijikọ China na kọntinent Europe na Africa na ntinye ego dị iche iche. Ọrụ dị na nkwado ego ahụ bụ nke Banklọ Ebu Ewu Ewu Eshia nke China na-achị.
Otu Ọgbọ Otu Ọhụụ mejupụtara okporo ụzọ, ụzọ ụgbọ okporo ígwè, mmanụ na mmanụ gas, ụzọ nnyefe ike, ọdụ ụgbọ mmiri na ọrụ ndị ọzọ ga-ejikọta China na ụwa.
Otu ihe eji eme ihe bụ sọ ụzọ abụọ: Akụkụ nke mbụ bụ ngalaba “Otu eriri ala” yana “Silk Road Economic Belt otu nke dị na mbara ala. Igwe a ga-ejikọ China na Central Asia, Eastern na Central Europe. Akụkụ nke abụọ bụ “21. Century Marine Silk Road ”dị n'elu ala. Ọ jikọtara China na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Africa na Europe. Ihe oru ngo a gunyere uzo oru ubara ala nke 6 na uzo ahia mbu nke 1.
Economiczọ akụ na ụba ala;
a) Akwa Eurasia New Eure na Western China na Eastern Russia,
b) Sino-Mongolian-Russian Corridor na Northern China na Mongolia site na Eastern Russia,
c) China-Central Asia, West Asia n'Osimiri West Asia na n'ebe ọdịda anyanwụ China, Iran, Turkey na Europe,
d) Corridor Sino-Indian Peninsula na South China site na Turkey-China ruo Singapore,
e) Corridor Sino-Pakistan na Southheast China site na Pakistan na Indian Ocean site na Pakistan,
f) Koodu Bangladesh-China-India-Myanmar na-ejikọ South China na India site na Bangladesh na Myanmar.
Okporo ụzọ akụ na ụba na-ejikọ osimiri / ọdụ ụgbọ mmiri China na Africa na Europe site na Singapore-Malaysia-Indian Ocean-Red Sea-Suez Canal-Mediterranean.
Ala Corridors (Red Line) na Corridors Sea (Blue Line) nke “Otu Ọhụụ Otu Mek na-egosi na eserese dị n'okpuru.
OMUME-EGO NA-EKWU MAKA N’ WORLDWA
Enwere ndị na-akwado, ndị na-apụnara mmadụ ihe na ndị na-emegide otu ụzọ One Way One Way na ụwa.
1. Ndi na akwado ndi mmadu n’agha otu oru
China, Iran, Pakistan Ọ bụ ezie na e nwere ihe karịrị mba 60 na-akwado ọrụ ahụ, enwere ike ikwu na ndị isi na-akwado ọrụ ahụ bụ China, Iran na Pakistan. Enwere ike ikwu na Iran na-ahụ ọrụ ahụ dịka ọta megide US na Pakistan dịka ọta megide India.
2. Ndị na-emegide usoro mmepe nke okporo ụzọ: India, Japan, USA, India
Sino-Pakistan Economic Corridor na-emegide ọrụ a n'ihi na India gafere na mpaghara Kashmir nke Pakistan nwere, nke na-agbagha ọbụbụeze India na iguzosi ike n'ihe ókèala ya, itinye ego ndị China na Indian Ocean, oru ngo a gbara India gburugburu ma na-enweghị uzo. Japan, nke na-eche na oru ngo a ga-agbanye n'ime ọnọdụ geopolitical na ọkara na ogologo oge, ga-etinye Japan n'ọnọdụ akụ na ụba na ọnọdụ geopolitical na nyocha ikpeazụ, na-emekọkwa ihe ọnụ na India ma na-emegide ọrụ ahụ. Ọ na - akwado atụmatụ US-India megide India, nke na - enyocha ọrụ ahụ, yana otu n'ime ndị na - emegide omume a.
3. Abstentions of Generation of Road project: Russia, European Union
Agbanyeghị na Russia pụtara dị ka otu n'ime ndị isi na ngalaba ahụ, ọ na-atụ egwu maka nsonaazụ ogologo ala na-esite na oru ahụ. Site na obere mmeputa ya, ala buru ibu, mmanụ na-akparaghị ókè, mmanụ sitere n'okike, mineral na akụrụngwa ndị ọzọ na ọnụ ọgụgụ mmadụ na-ebelata, Russia na-eburu n'uche ịbụ nke mgbakwunye China dị na ntanetị ogologo oge, na-eburu ụzọ na oru ahụ ma gbochie ọrụ ahụ na-eyi Russia egwu. na-etolite. Byzọ ndị Russia gbasoro n'ihe metụtara ọrụ a bụ omume nke bulun nọ na ya, lelee ya ma gbochie ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ”.
Ọ bụ ezie na European Union etinyela aka na N 2020 Strategy Agenda maka Njikọ Njikọ na European Union-China na China, nchegbu a na-enweta na azụmahịa nke China nyere ga-eduga asọmpi na-ezighi ezi megide mba ndị European Union ka edozibeghị. Agbanyeghị, European Union na-eburu n'uche ohere dị iche iche a ga-eke. Abụọ n'ime adịghị ike nke EU bụ na ha enweghị ike agha nkịtị na enweghị usoro iwu ala ọzọ. Ya mere, na agbanyeghị Usoro Ego nke European Union bịanyere aka na oru a, enwere ike ikwu na ndị otu a enweghị echiche jikọtara ọnụ na mba ọ bụla so na-eme atụmatụ nkeonwe na mpaghara ahụ.
Otu ụzọ Project ọgbọ na toki
Turkey ga kwado ọrụ, nke bụ ngalaba-nchoputa nke Asian Infrastructure Investment Bank, na China, abaala One-Way Summit echebe Mmadụ na-anya-aka na oru ngo a. Ọnwụ nke obi ike na Turkey dị n'ebe ọdịda anyanwụ òtù n'ihi na nke ikpeazụ afọ iri, na-West ka kewapụrụ ya na-achọ nkwado nke Russia na China na guzozie ụwa. abụrụ Turkey na Asia a ọhụrụ aku powerhouse nke oru ngo na si a pụrụ ịdabere na akara na mpụga nke Iran (China-Central Asia-Caspian Sea-Azerbaijan-Georgia-Turkey) iru ohere maliteghachila Turkey ka Central Asia, China n'elu Turkish Republic ' e. Otú ọ dị, na China akụ na ụba oru ụba n'elu Turkish Republic, Turkey si geopolitical na dechapụ mmetụta nke bi o doro anya na e nwere mkpa nke imekọ ihe ọnụ dị na Russia. Nke a bụ otu n'ime nsogbu nke mere ka ụjọ jide Russia na oru ngo a, yana ikekwe ọ kacha mkpa. Turkey-China mmekọahụ na mmepe nke mkpa nke ọrụ igwu egwu Uighur Autonomous Region nke ihe ga-kwuru na n'ụsọ.
ỌR RO MAKA ENB PRR AND AH CR AND KWESIR AND CBỌ EGO NA ANDB ASR AS ASB ASR AS ASIAN ASA
Ala di iche-iche, Central Asia Turkic Republics di na gburugburu oru ngo a. Agbanyeghị na o doro anya na mmụba nke China dị ka ike akụ na ụba ka a ga-enwe mmetụta zuru ụwa ọnụ, ọ bụrụ na ọrụ ahụ na-aga nke ọma ma ọ bụ na-akụ afọ n'ala, ndị Republic of Turkey na gburugburu mbụ ga-ata ahụhụ kachasị. Mmụba nke mmetụta akụ na ụba China na oge na ogologo oge, nnwere onwe nke ngwongwo, ego na ọrụ nwere ike imebi ọnụ ọgụgụ ndị bi na Republic Republic. Nkwụsi ike nke ndị Republic Republic, nke bụ mpaghara nchekwa n'etiti Russia na China, abụghị naanị maka mba ndị a, kamakwa maka nchekwa Russia. Ọ bụghị naanị okwu nke ndị Turkey Republics nwere ike imeri site na ha. Russia na nke a nke ga-atụle ma na e nwere mkpa nke imekọ ihe ọnụ nke Turkey na Turkish Republic.
ỌR RO AKW ANDKWỌ AKW ANDKWỌ AH ANDR AND AH AND NA AKW TRKWỌ
The erughị ala n'etiti US na Iran, dị ka a Generation imebi ojiji nke a Road Project si Iran ikpeazụ West Asia korido, China kama a korido, ọ prefers China-Kazakhstan-Azerbaijan-Georgia-Turkey-Europe paseji. Ọnọdụ a bụ a usoro uru na mba anyị, Turkey bụ nso ikpọkidem Central Asian Turkish Republics. A ọgbọ West Asia, na Caspian Sea korido Project variant nke a ụzọ site Turkey, ọ bụ ezie na, na-na jikọọ na ọdụ ụgbọ mmiri nke Trabzon, Turkey Railway Network na-hampering oru ngo erite uru site Eastern Black Sea Region. Ya mere, gold nke ejikọta Trabzon, Turkey Railway Network ugboro ọzọ ise bụ mma.
A ọgbọ ngo bụ akụ na ụba imekọ ihe ọnụ na obere ma na-ajụ okwu nke a ụzọ oru ngo, na-echebara ndị na-adịte geopolitical egwu na nwere ike ime, mkpa ọ dị inwe ọzọ atụmatụ banyere Turkey si ngo bụ nnukwu. Turkey na-akụkụ a ụzọ oru ngo nke a ọgbọ, dị ka a N'ihi ya, bụ a usoro nzọụkwụ nke ga-ewusi Turkey ọhụrụ zuru ụwa ọnụ ọnọdụ. "(adaha)
Ọtụtụ Nrụsi Ike na Usoro Mgbochi Green
"Şlọ ụgbọ ala Eskişehir: Maka Ihe Nketa Mmepere"
Turkey ụgbọ okporo ígwè netwọk